China okra box ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | ပြေးလွှား
သွပ်သွင်းထားသောပလတ်စတစ်သည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောထုပ်ပိုးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာသေတ္တာများ, bins, စုစုပေါင်း, ခွဲဝေသို့ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေစိုခံနိုင်ပြီးမြှောင်းပုံစက္ကူထက်များစွာသာလွန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ဘောတင်သူများသည်လတ်ဆတ်သောကညွတ်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ စပျစ်ပင်များကောက်ယူသည့်စပျစ်သီး၊ ရေခဲထုပ်ပိုးထားသောပြောင်းဖူး၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်အခြားလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1.Fresh သစ်သီးများထုပ်ပိုး box ကို
ပန်းသီးသေတ္တာ၊ စပျစ်သီးဘူး၊ လိမ္မော်ရောင်သေတ္တာ၊ ဘလူးဘယ်ရီသေတ္တာ၊ ကီဝီသေတ္တာ၊ နာနတ်သီးသေတ္တာ၊ ဖရဲသီးသေတ္တာစသည်နှင့်တူသည်
2.Fresh ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုပ်ပိုး box ကို
ရုံးပတီသီးသေတ္တာ၊ ချိုသောပြောင်းဖူးသေတ္တာ၊ ကညွတ်သေတ္တာ၊ ပန်းဂေါ်ဖီသေတ္တာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သေတ္တာ၊ ကြက်သွန်အိတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်ဘူး၊
4. ပင်လယ်စာထုပ်ပိုး box ကို
အေးခဲနေသောပုဇွန်သေတ္တာများ၊ ငါးသေတ္တာများ၊ ကမာသေတ္တာများ၊
5. Medicine ထုပ်ပိုး box ကို
7.Turnover box ကို
8.ESD box ကိုနှင့်ကူးယူ box ကို
10.drilling core ကို box ကို
သံမဏိပြား၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်သည်မြှောင်းပုံဖိုက်ဘုတ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ ပေးထားသောကိန်းဂဏန်းများကိုလမ်းညွှန်အနေဖြင့်ပေးပြီး၊ အသုတ်လိုက်သုတ်ခြင်းနှင့်ကုန်ချောကွန်တိန်နာ၏ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
Corrugated plast Containers ၏ကောင်းကျိုးများ
3. အက်ဆစ်၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ ဆပ်ပြာ၊ အမဲဆီနှင့်ဆီအားလုံးနီးပါးကိုထည့်ပါ
-17F မှ 230F သို့အပူချိန်အစွန်းရောက်သည်
7.Sanitary & ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခမဲ့ကြာရှည်ခံ
9.100% ပြန်လည်အသုံးပြု & ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်ရွေ
သင်၏လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဒီဇိုင်းအမှတ်အသားသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ခြင်းပုံရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ထံသို့ပေးပို့ပါ။ သင်၌နမူနာဇယားရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပို့ပါ။ အတည်ပြုပုံစံအတွက်နမူနာသေတ္တာကိုကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်စိတ်ချပါသည်။
အဖြူ၊ အပြာ၊ အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊
နောက်တစ်ခု: ပီဇာ box